အလုပျသမားသံအရာရှိရုံး Myanmar Labour Attache Office, Pan Road, Bangkok (2021)
အလုပျသမားသံအရာရှိရုံး Myanmar Labour Attache Office
၂၉-၁၂-၂၀၂၀ရကျနတှေ့ငျ တာချ့ခရိုငျအုပျခြုပျရေးမှူးရုံးက COVID -19 ရောဂါ ထိနျးခြုပျနိုငျရေးအတှကျ ၃-၁-၂၀၂၁ရကျနေ့ အထိ
တာချ့ခရိုငျအတှငျးသို့ ဝငျထှကျခှငျ့ ယာယီ ပိတျထားသဖွငျ့ မဲဆောကျ-
မွဝတီ လမျး‌ကွောငျးမှ ပွနျလာမညျ့ မွနျမာနိုငျငံသားမြားအနဖွေငျ့ လောလောဆယျ ပွနျမလာကွပါရနျ မတ်ေတာရပျခံအပျပါသညျ။
အလုပျသမားသံအရာရှိရုံးအနဖွေငျ့ လမျးခရီးတှငျ ပိတျမိနသေညျ့ ဆူရတျဌာနီ၊ ကဘီနှငျ့ဖူးခတျတို့မှ လာရောကျကွသော မွနျမာနိုငျငံသား ကြား ၁‌၆ ဦး၊ မ ၈ ဦး၊ ပေါငျး ၂၄ ဦးပါကား ၃ စီးအား လမျးခရီး အဆငျပွစေရေေးအတှကျ ထိုငျးနိုငျငံ ဒသေဆိုငျရာအာဏာပိုငျမြား နှငျ့ အောငျမွငျစှာညှိနှိုငျးဆောငျရှကျခဲ့ပွီး ၁၇း၃၀နာရီတှငျ BCF ဇုနျအတှငျးရောကျရှိပွီး မွနျမာနိုငျငံသို့ဆကျလကျထှကျခှာနိုငျခဲ့ပါသညျ။
ယနတှေ့ငျ မဲဆောကျ-မွဝတီတံတားအမှတျ ၂ မှ ကြား (၄၄) ဦး၊မ ( ၂၃) ဦး၊ ပေါငျး (၆၇)ဦးတို့အား မွနျမာနိုငျငံသို့ ပွနျနိုငျရနျ ဆကျလကျကူညီဆောငျရှကျပေးနိုငျခဲ့ပါသညျ။
၂၈-၁၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် အလုပ်သမားသံအရာရှိ ဦးသူရိန်လင်းနှင့် ဦးဝေမင်းအိမ်တို့သည် စမုစခွန်ခရိုင်မှ အလုပ်ရှင်က အလုပ်သမား (၁၈)ဦးအား စမုပရာကန်ခရိုင်တွင် လာရောက်စွန့်ပစ်ခဲ့ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အဆိုပါအလုပ်သမားများအား Quarantine ထားရှိသည့် Hotel သို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး ဒုတိယအကြိမ်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု အခြေအနေကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ ပါသည်။
၂၈-၁၂-၂၀၂၀ ရကျနတှေ့ငျ အလုပျသမားသံအရာရှိ ဦးသူရိနျလငျးနှငျ့ ဦးဝမေငျးအိမျတို့သညျ စမုစခှနျခရိုငျမှ အလုပျရှငျက အလုပျသမား (၁၈)ဦးအား စမုပရာကနျခရိုငျတှငျ လာရောကျစှနျ့ပဈခဲ့ခွငျးနှငျ့စပျလဉျြး၍ အဆိုပါအလုပျသမားမြားအား Quarantine ထားရှိသညျ့ Hotel သို့ သှားရောကျခဲ့ပွီး ဒုတိယအကွိမျကနျြးမာရေးစဈဆေးမှု အခွအေနကေို ကွညျ့ရှုစဈဆေးခဲ့ ပါသညျ။
အလုပ်သမားသံအရာရှိများသည် ၂၇-၁၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ နံနက်ပိုင်းတွင် Samut Sakhon Port in Port out Contro Center သို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး ထိုင်းရေတပ်မှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊ စမုစခွန်ခရိုင်အလုပ်အကိုင်ဌာနမှူး Mrs. Auttaya Aumnongpho နှင့်အတူ ရေလုပ်သားများကို ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးနေမှုအား သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါသည်။
အသွားအလာကန့်သတ်ထားသည့် ပုဇွန်ဈေးနှင့် ခေတ္တပိတ်သိမ်းထားသည့် ပင်လယ်အစားအစာများရောင်းချသည့် တလေထိုင်းဈေးများတွင် လုပ်ကိုင်နေသည့် အလုပ်သမားများ စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲဖြစ်နေမှုအပေါ် အလုပ်သမားသံအရာရှိများသည် စမုစခွန်ခရိုင် အလုပ်အကိုင်ဌာနမှူး Mrs. Auttaya Aumnongpho နှင့်အတူ နေ့လယ်ပိုင်းတွင် သွားရောက်၍ ထိုင်းအလုပ် အကိုင်ဌာနမှ ကာကွယ်ဆေးပစ္စည်းများနှင့် အခြေခံစားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများကိုလည်း ကောင်း၊ စေတနာရှင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှ အခြေခံစားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများကိုလည်းကောင်း လှူဒါန်းဆောင်ရွက်နေခြင်းအပေါ် လိုအပ်သည်များ ပူးပေါင်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။
အလုပျသမားသံအရာရှိမြားသညျ ၂၇-၁၂-၂၀၂၀ ရကျနေ့၊ နံနကျပိုငျးတှငျ Samut Sakhon Port in Port out Contro Center သို့ သှားရောကျခဲ့ပွီး ထိုငျးရတေပျမှ တာဝနျရှိပုဂ်ဂိုလျမြား၊ စမုစခှနျခရိုငျအလုပျအကိုငျဌာနမှူး Mrs. Auttaya Aumnongpho နှငျ့အတူ ရလေုပျသားမြားကို ကနျြးမာရေးစဈဆေးနမှေုအား သှားရောကျကွညျ့ရှုခဲ့ပါသညျ။
အသှားအလာကနျ့သတျထားသညျ့ ပုဇှနျဈေးနှငျ့ ခတ်ေတပိတျသိမျးထားသညျ့ ပငျလယျအစားအစာမြားရောငျးခသြညျ့ တလထေိုငျးဈေးမြားတှငျ လုပျကိုငျနသေညျ့ အလုပျသမားမြား စားဝတျနရေေးအခကျအခဲဖွဈနမှေုအပျေါ အလုပျသမားသံအရာရှိမြားသညျ စမုစခှနျခရိုငျ အလုပျအကိုငျဌာနမှူး Mrs. Auttaya Aumnongpho နှငျ့အတူ နလေ့ယျပိုငျးတှငျ သှားရောကျ၍ ထိုငျးအလုပျ အကိုငျဌာနမှ ကာကှယျဆေးပစ်စညျးမြားနှငျ့ အခွခေံစားသောကျကုနျပစ်စညျးမြားကိုလညျး ကောငျး၊ စတေနာရှငျလူမှုအဖှဲ့အစညျးမြားမှ အခွခေံစားသောကျကုနျပစ်စညျးမြားကိုလညျးကောငျး လှူဒါနျးဆောငျရှကျနခွေငျးအပျေါ လိုအပျသညျမြား ပူးပေါငျး ပါဝငျဆောငျရှကျပေးခဲ့ပါသညျ။
စကားပွနျအဖွဈဆောငျရှကျလိုသညျ့ စတေနာ့ဝနျထမျးမြား ဖိတျချေါခွငျး
စမုစခှနျခရိုငျ မဟာခြိုငျဧရိယာအတှငျး COVID-19 ကူးစကျ​ရောဂါပွနျ့ပှားမှုထိနျးခြုပျနိုငျ​ရေးနှငျ့ ပို့းတှရှေိ့လူနာမြားအား ယာယီဆေးရုံမြားဖွငိ့ ​ဆေးဝါးကုသမှု​မြား ဆောငျရှကျမညျ့ကာလအတှငျး ထိုငျးကနျြးမာ​ရေးဌာနနှငျ့ ပူး​ပေါငျး​ဆောငျရှကျရာတှငျ ထိုငျးဘာသာစကားတတျကြှမျးသညျ့ ​စတေနာ့ဝနျထမျးမြားလိုအပျလကျြရှိပါသညျ။
ထို့​ကွောငျ့ စကားပွနျ​အဖွဈ​ဆောငျရှကျလိုသညျ့စတေနာ့ဝနျထမျးမြားအ​နဖွေငျ့ အလုပျသမားသံအရာရှိရုံးနှငျ့ မဟာခြိုငျရှိ သာမနျမွနျမာနိုငျငံကူးလကျမှတျထုတျ​ပေး​ရေးဌာနစိတျ၊ ယာယီအခကျြအလကျစု​ဆောငျး​ရေးဌာနသို့ သတငျး​ပေးပို့ဆကျသှယျ​ပေးပါရနျ အသိ​ပေးနှိုး​​​ဆျောအပျပါသညျ။
COVID-19 ရောဂါထိနျးခြုပျ​နသေညျ့ကာလအတှငျး မွနျမာနိုငျငံသားခငျြးကူညီ​ထောကျပံ့လိုသညျ့ လူပုဂ်ဂိုလျအဖှဲ့အစညျးမြားအ​နဖွေငျ့ ပစ်စညျးမြား လှူဒါနျးရာတှငျ အခကျအခဲတဈစုံတဈရာရှိပါက အလုပျသမားသံအရာရှိရုံးသို့
အလုပျသမားသံအရာရှိ (ဗနျကောကျ) 09 4884 5484
အလုပျသမားသံအရာရှိ (ဗနျကောကျ) 06 5220 6952
ယာယီအခကျြအလကျကောကျယူရေးဌာန (မဟာခြိုငျ) 06 6139 3475
08 0583 2247
APHWAT Building Co., Ltd. မှ အလုပ်သမားများ လုပ်အားခအချိန်မီ မရရှိခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍
၂၆-၁၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ နံနက်ပိုင်းတွင် အလုပ်သမားသံအရာရှိ ဦးသူရိန်လင်းနှင့် ဦးဝေမင်းအိမ်တို့မှ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းခွင်သို့ သွားရောက်၍ အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားများအား ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။
APHWAT Building Co., Ltd. မှ အလုပျသမားမြား လုပျအားခအခြိနျမီ မရရှိခွငျးနှငျ့စပျလဉျြး၍
၂၆-၁၂-၂၀၂၀ ရကျနေ့၊ နံနကျပိုငျးတှငျ အလုပျသမားသံအရာရှိ ဦးသူရိနျလငျးနှငျ့ ဦးဝမေငျးအိမျတို့မှ သကျဆိုငျရာလုပျငနျးခှငျသို့ သှားရောကျ၍ အလုပျရှငျနှငျ့ အလုပျသမားမြားအား ညှိနှိုငျးဆောငျရှကျပေးခဲ့ပါသညျ။
အလုပ်သမားသံအရာရှိ ဦးသူရိန်လင်း၊ ဦးရဲရန်အောင်နှင့် ဦးဝေလင်းမောင်တို့သည် အသွားအလာ ကန့်သတ်ထားရှိသည့် ပုဇွန်ဈေး၊ ယာယီဆေးရုံတည်ဆောက်မည့် ဘောလုံးကွင်းနှင့် ယာယီပိတ်သိမ်းထားသည့် ပုဇွန်ဈေးတွင် လုပ်ကိုင်နေသည့် အလုပ်သမားများနေထိုင်သည့် နေရာများသို့ စမုစခွန်ခရိုင်အလုပ်အကိုင်ဌာနမှူး Mrs. Auttaya Aumnongpho နှင့်အတူသွားရောက်၍ ယာယီဆေးရုံတည်ဆောက်လျက်ရှိသည့်အခြေအနေ၊ အလုပ်သမားများ၏ အခြေခံစားသောက်ကုန်များနှင့် ကာကွယ်ရေးဆေးပစ္စည်းများ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရေး၊ ကိုယ်ဝန်သည်များအတွက် ဆေးခန်းပြသခွင့်ရရှိနိုင်ရေးနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ပိတ်သိမ်းသည့်ကာလအတွင်း အလုပ်သမားများအတွက် ဥပဒေပါ ရသင့်ရထိုက်သည့် အခွင့်အရေးများ ရရှိနိင်ရေး ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
အလုပျသမားသံအရာရှိ ဦးသူရိနျလငျး၊ ဦးရဲရနျအောငျနှငျ့ ဦးဝလေငျးမောငျတို့သညျ အသှားအလာ ကနျ့သတျထားရှိသညျ့ ပုဇှနျဈေး၊ ယာယီဆေးရုံတညျဆောကျမညျ့ ဘောလုံးကှငျးနှငျ့ ယာယီပိတျသိမျးထားသညျ့ ပုဇှနျဈေးတှငျ လုပျကိုငျနသေညျ့ အလုပျသမားမြားနထေိုငျသညျ့ နရောမြားသို့ စမုစခှနျခရိုငျအလုပျအကိုငျဌာနမှူး Mrs. Auttaya Aumnongpho နှငျ့အတူသှားရောကျ၍ ယာယီဆေးရုံတညျဆောကျလကျြရှိသညျ့အခွအေနေ၊ အလုပျသမားမြား၏ အခွခေံစားသောကျကုနျမြားနှငျ့ ကာကှယျရေးဆေးပစ်စညျးမြား ဖွညျ့ဆညျးပေးနိုငျရေး၊ ကိုယျဝနျသညျမြားအတှကျ ဆေးခနျးပွသခှငျ့ရရှိနိုငျရေးနှငျ့ လုပျငနျးခှငျပိတျသိမျးသညျ့ကာလအတှငျး အလုပျသမားမြားအတှကျ ဥပဒပေါ ရသငျ့ရထိုကျသညျ့ အခှငျ့အရေးမြား ရရှိနိငျရေး ညှိနှိုငျးဆှေးနှေးခဲ့ပါသညျ။
ထိုငျး-မွနျမာ ခဈြကွညျရေးတံတား၂ တှငျအလုပျသမားသံအရာရှိ ဦးဝငျးသူ (မဲဆောကျတာဝနျခံ)
နှငျ့ စတေနာ့ဝနျထမျးမြား စုပေါငျး၍
မဲဆောကျ BCF ဇုနျတှငျ
နရေပျပွနျအလုပျသမားမြားနှငျ့ အခကျအခဲရှိသညျ့လူနာမြားအား မွနျမာနိုငျငံသို့ အဆငျပွခြေောမှစှေ့ာ ပွနျနိုငျရေးအတှကျ ဆောငျရှကျပေးလြှကျရှိရာ ၂၆-၁၂-၂၀၂၀
ရကျနတှေ့ငျ ကြား (၁၁၄) ဦး၊မ ( ၇၀) ဦး၊ ပေါငျး (၁၈၄)ဦး မွနျမာနိုငျငံသို့ ပွနျနိုငျရနျ
ထိုငျး-မွနျမာ ခဈြကွညျရေးတံတား၂ တှငျ အလုပျသမားသံအရာရှိ ဦးဝငျးသူ (မဲဆောကျတာဝနျခံ)
နှငျ့ စတေနာ့ဝနျထမျးမြား စုပေါငျး၍
နရေပျပွနျအလုပျသမားမြားနှငျ့ အခကျအခဲရှိသညျ့လူနာမြားအား မွနျမာနိုငျငံသို့ အဆငျပွခြေောမှစှေ့ာ ပွနျနိုငျရေးအတှကျ ဆောငျရှကျပေးလြှကျရှိရာ ၂၆-၁၂-၂၀၂၀
ရကျနတှေ့ငျ ကြား (၁၁၄) ဦး၊မ ( ၇၀) ဦး၊ ပေါငျး (၁၈‌၄)ဦး မွနျမာနိုငျငံသို့ ပွနျနိုငျရနျ ဆကျလကျကူညီဆောငျရှကျပေးနိုငျခဲ့ပါသညျ။
ကိုဗဈရောဂါဖွဈပှားနသေညျ့ကာလအတှငျး ရှပွေ့ောငျးအလုပျသမားမြားအနဖွေငျ့ ရောဂါပြံ့ပှားမှု မဖွဈစရေေး ဒသေတဈခုမှ တဈခုသို့ သှားလာခွငျးမပွုရနျကနျ့သတျထားပါသဖွငျ့ ထိုငျးနိုငျငံ၏ ညှနျကွားခကျြမြားကို လိုကျနာဆောငျရှကျပေးကွပါရနျ နှိုးဆျောအပျပါသညျ။
ကိုဗဈရောဂါဖွဈပှားနသေညျ့ကာလအတှငျး နယျစပျဒသေမြားမှ တရားမဝငျ ဝငျရောကျခွငျးမြား မပွု လုပျရနျနှငျ့ တရားမဝငျ ဝငျရောကျလာသူမြားနှငျ့ အလုပျသမား ချေါဆောငျလာသူမြားကို ထိုငျးနိုငျငံ အစိုးရမှ ထိရောကျစှာအရေးယူဆောငျရှကျသှားမညျဖွဈပါကွောငျး သိရှိနိုငျပါရနျ အသိပေး နှိုးဆျောအပျပါသညျ။
အလုပျသမားသံအရာရှိ ဦးသူရိနျလငျး၊ ဦးမြိုးမွငျ့နိုငျ၊ ဦးရဲရနျအောငျတို့သညျ ၂၅-၁၂-၂၀၂၀ ရကျနတှေ့ငျ စမုစခှနျခရိုငျ၊ တလာကုဗဟိုပုဇှနျဈေးကွီးသို့ သှားရောကျ၍ စမုစခှနျခရိုငျအုပျခြုပျရေးမှူး ဇနီး၊ စမုစခှနျခရိုငျ ဒုတိယ အုပျခြုပျရေးမှူး Mr. Surasak Phonyangsong တို့နှငျ့တှဆေုံ့ခဲ့ပွီး အဆိုပါဧရိယာအတှငျး အမှိုကျမြားပုံမှနျ သနျ့ရှငျးရေးပွုလုပျနိုငျရေး၊ အရေးပျေါဖွဈသညျ့လူနာမြားအတှကျ ဆောငျရှကျပေးမညျ့အစီအစဉျမြားကို ဆှေးနှေးခဲ့ပါသညျ။
ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးမျိုးမြင့်သန်းသည် စစ်သံမှူး၊ မြန်မာသံရုံး၊ အလုပ် သမားသံအရာရှိရုံးတို့မှ တာဝန်ရှိသူများ လိုက်ပါလျက် ယနေ့ နေ့လယ်ပိုင်းတွင် စမုစခွန်ခရိုင် အုပ်ချုပ် ရေးမှူး Mr. Verasak Vichitsangsri အား သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်အတူ ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ဌာန၊ ခရိုင်တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြပါသည်။ စမုစခွန်ခရိုင်အတွင်း COVID-19 ရောဂါကူးစက် ပျံ့ပွားမှု ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက် အသွားအလာကန့်သတ်ထားသောနေရာမှ မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများနှင့်ပတ်သက်၍ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုအခြေအနေ၊ နေထိုင်စားသောက်မှု အခြေအနေ တို့အား ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် တလာကုပုဇွန်ဈေးအနီး အသွားအလာ ကန့်သတ်ထားသော နေရာရှိ မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများအား မြန်မာသံအမတ်ကြီးနှင့်အတူ စမုစခွန်ခရိုင်ဒုတိယအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ထိုင်းနိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ခရိုင်အလုပ်အကိုင်ဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ တာဝန်ရှိသူ များ လိုက်ပါလျက် သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ သံအမတ်ကြီးမှ အလုပ်သမားများ၏ လိုအပ်ချက် များကို မေးမြန်းကာ အားပေးစကားပြောကြားခြင်း၊ လိုအပ်ချက်များကို ထိုင်းတာဝန်ရှိသူများနှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်း၊ အစားအစာထောက်ပံ့ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အလုပ်သမားသံအရာရှိ ဦးသူရိန်လင်း၊ ဦးဝေမင်းအိမ်တို့သည် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ အလုပ်သမားဝန်ကြီး၊ အလုပ် အကိုင်ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တို့နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ကိုဗစ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေသည့်ကာလအတွင်း အထောက်အထားမဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ ဆက်လက်နေထိုင်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိစေရေး၊ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံပိတ်သိမ်းမှုဖြစ်စဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဥပဒေနှင့်အညီ ရသင့်ရထိုက်သည့် အခွင့်အရေးများ ရရှိစေရေး၊ အထောက်အထားမဲ့ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုမဖြစ်စေရေး ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
၂၄-၁၂-၂၀၂၀ ရက်။ ကြာသပတေးနေ့။
၂၄-၁၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် အလုပ်သမားသံအရာရှိ ဦးသူရိန်လင်း၊ ဦးဝေမင်းအိမ်တို့သည် စမုစခွန်ခရိုင်မှ အလုပ်ရှင်က အလုပ်သမား (၁၈)ဦးအား စမုပရာကန်ခရိုင်တွင် လာရောက်စွန့်ပစ်ခဲ့ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စမုပရာကန်ခရိုင်အလုပ်အကိုင်ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး အလုပ်သမားများအား ယာယီစောင့်ရှောက်ထားရှိသည့်နေရာသို့ သွားရောက်တွေ့ဆုံအားပေးခဲ့ပြီး အလုပ်သမားများကို စောင့်ရှောက်ထားရှိမှုအခြေအနေ၊ နေထိုင်စားသောက်မှုအခြေအနေများနှင့် ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှု အခြေအနေများကို မေးမြန်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ အလုပ်သမားများအနေဖြင့် နေထိုင်စားသောက်မှု အဆင်ပြေပါကြောင်း၊ ပထမအကြိမ်ဆေးစစ်ဆေးရာတွင် ၁၈ ဦးလုံး Negative (ပိုးမရှိ)အဖြေ ရရှိပါကြောင်းနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ဆက်လက်နေထိုင်လုပ်ကိုင်နိုင်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ၎င်းတို့၏ဆန္ဒအပေါ် မူတည်၍ ဆက်လက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ထိုငျးငံဆိုငျရာ မွနျမာသံအမတျကွီး၏ ဦးဆောငျလမျးညှနျမှုဖွငျ့ ၂၄.၁၂.၂၀၂၀ ရကျနတှေ့ငျ ထိုငျးနိုငျငံ၊ မဲဆိုငျမွို့မှတဈဆငျ့ နရေပျပွနျလိုသူ မွနျမာနိုငျငံသား ကြား ၃၇ ဦး၊ မ ၃၃ ဦး၊ ပေါငျး၇၀ ဦးအား တာခြီလိတျခရိုငျမှ တာဝနျရှိသူမြားထံ စနဈတကလြှဲပွောငျးခဲ့ပါသညျ။
ထိုသို့နရေပျပွနျရေးဆောငျရှကျရာတှငျ အလုပျသမားသံအရာရှိနှငျ့အတူ ထိုငျးနိုငျငံမှ မဲဆိုငျမွို့နယျအုပျခြုပျရေးမှူး၊ထိုငျးကနျြးမာရေးဝနျထမျးမြား၊ ကိုသနျးထှနျးအောငျ၊ ကိုစိုငျးတို့ဦးဆောငျသညျ့ မဲဆိုငျမွို့၊ လုမှုကရုဏာလူမှုကူညီရေးအသငျးအဖှဲ့ဝငျမြား၊ တာခြီလိတျခရိုငျ၊ ခရိုငျအုပျခြုပျရေးမှူး နှငျ့ တာဝနျရှိသူမြား မှ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျခဲ့သဖွငျ့ ထိုငျးနိုငျငံရောကျ နရေပျပွနျမွနျမာနိုငျငံသားမြားသညျ အဆငျပွခြေောမှစှေ့ာ နရေပျပွနျနိုငျခဲ့ကွပါသညျ။
သို့ပါ၍ မွနျမာနိုငျငံသားမြားနရေပျပွနျနိုငျရေး အဘကျဘကျမှ ဝိုငျးဝနျးကူညီဆောငျရှကျခဲ့ကွသူမြားအား ကြေးဇူးအထူးတငျရှိပါကွောငျး ဂုဏျပွုမှတျတမျးတငျအပျပါသညျ။
ရှငျသနျကာကှယျ နယူးနျောမယျ (New Normal)
Youtube link: https://youtu.be/RtP5k9Bl8xg
ဗီဒီယိုကွာခြိနျ = ၃ မိနဈ
နရေပျပွနျအလုပျသမားမြားနှငျ့ အခကျအခဲရှိသညျ့လူနာမြားအား မွနျမာနိုငျငံသို့ အဆငျပွခြေောမှစှေ့ာ ပွနျနိုငျရေးအတှကျ ဆောငျရှကျပေးလြှကျရှိရာ ၂၃-၁၂-၂၀၂၀
ရကျနတှေ့ငျ ကြား (၁၅၈) ဦး၊မ ( ၁၀၈) ဦး၊ ပေါငျး (၂၆၆)ဦး မွနျမာနိုငျငံသို့ ပွနျနိုငျရနျ
နရေပျပွနျအလုပျသမားမြားနှငျ့ အခကျအခဲရှိသညျ့လူနာမြားအား မွနျမာနိုငျငံသို့ အဆငျပွခြေောမှစှေ့ာ ပွနျနိုငျရေးအတှကျ ဆောငျရှကျပေးလြှကျရှိရာ ၂၃-၁၂-၂၀၂၀
ရကျနတှေ့ငျ ကြား (၁၅၈) ဦး၊မ ( ၁၀၈) ဦး၊ ပေါငျး (၂၆၆)ဦး မွနျမာနိုငျငံသို့ ပွနျနိုငျရနျ ဆကျလကျကူညီဆောငျရှကျပေးနိုငျခဲ့ပါသညျ။
စမုစခှနျခရိုငျ၊ ပုဇှနျဈေးရှိ အလုပျသမားမြားနှငျ့ တှဆေုံ့ခဲ့မှုအခွအေနေ။
၂၃-၁၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ နံနက်ပိုင်းတွင် အလုပ်သမားသံအရာရှိရုံးမှ ဦးသူရိန်လင်း၊ ဦးမျိုးမြင့်နိုင်နှင့် ဦးရဲရန်အောင်တို့သည် စမုစခွန်ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုးဦးဆောင်သည့်အဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး တလာကုဗဟိုပုဇွန် ဈေးကြီးအတွင်းရှိ လက်ရှိဆောင်ရွက်နေသည့် အခြေအနေများ၊ ဆေးပေးခန်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများ အား ကြည့်ရှုပြီး အလုပ်သမားများ၏ လက်ရှိအခြေအနေများအား မေးမြန်း၍ အဆိုပါနေရာတွင် ဆောင်ရွက်နေသည့် ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ လူမှုမိတ်ဖက်အဖွဲ့ rak thais နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး လိုအပ် သည်များ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
နေ့လယ်ပိုင်းတွင် မဟာချိုင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ Wat Krok krak ဘုရားကျောင်းအနီးရှိ အလုပ်သမားများအား ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးနေသည့်နေရာသို့ သွားရောက်၍ မဟာချိုင်ကူးစက်ရောဂါပျံ့ပွားမှုစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ တာဝန်ခံ၊ လူမှုမိတ်ဖက်အဖွဲ့ rak thais နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ဆက်လက်စစ်ဆေးရန်ကျန်ရှိသည့် လုပ်ငန်းစဉ် များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည့်အခြေအနေများအား ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
နေရပ်ပြန် အလုပ်သမား ၈၇ ဦးနဲ့
အချုပ်လွတ် ၈ ဦး၊ ပေါင်း ၉၅ ဦးကို
အလုပ်သမားသံအရာရှိ ဦးထက်ဝေဖြိုးနှင့် ဦးကျော်စိုးဝေ
တို့သည်နှစ်နိုင်ငံ ဒေသအာဏာပိုင်များနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး
စမှတျစခှနျခရိုငျအတှငျးရှိ တလာကုဗဟိုပုဇှနျဈေးကွီးတှငျ ကိုဗဈရောဂါပိုးတှရှေိ့မှုနှငျ့ပတျသကျ၍ လိုအပျသညျ့ ကိစ်စရပျမြားပူးပေါငျးကူညီဆောငျရှကျနိုငျရနျအတှကျ မွနျမာသံရုံးနှငျ့ အလုပျသမား သံအရာရှိရုံးမှ ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့သညျ စမှတျစခှနျ ခရိုငျမှ တာဝနျရှိသူမြားနှငျ့ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးခဲ့ပွီး နောကျ lockdown ပွုလုပျထားသညျ့ နယျမွအေတှငျးသို့ သှားရောကျကွညျ့ရှုကာ အလုပျသမားမြားအား အားပေးစကားပွောခွငျးနှငျ့ လိုအပျသညျမြားညှိနှိုငျးခွငျးတို့ ဆောငျရှကျပေးခဲ့ပါသညျ။
မွနျမာရှပွေ့ောငျးအလုပျသမားမြားအနဖွေငျ့ တရားဝငျအထောကျအထားရှိသညျဖွဈစေ၊ မရှိသညျဖွဈစေ စိုးရိမျကွောငျ့ကွရနျမလိုဘဲ မိမိကိုယျကိုသံသယရှိပါက နီးစပျရာဆေးရုံ သို့မဟုတျ ကနျြးမာရေးဌာန မြားသို့ သှားရောကျ၍ စဈဆေးမှုခံယူရနျနှငျ့ ထိုငျးနိုငျငံတှငျ ထုတျပွနျထားသော စညျးမဉျြးဥပဒနှေငျ့ ကနျြးမာရေးဆိုငျရာညှနျကွားခကျြမြားနှငျ့အညီ လိုကျနာဆောငျရှကျကွပါရနျ တိုကျတှနျးနှိုးဆျော အပျပါသညျ။
ယခုဖွဈပျေါနသေညျ့ အခွအေနမြေားနှငျ့ပတျသကျ၍ မွနျမာနိုငျငံသံရုံး၊ စဈသံရုံး၊ အလုပျသမား သံအရာရှိရုံးတို့သညျ ထိုငျးနိုငျငံ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန၊ အလုပျသမားဝနျကွီးဌာန၊ အလုပျအကိုငျဦးစီး ဌာန၊ စမှတျစခှနျခရိုငျအုပျခြုပျရေးဌာန၊ စမှတျစခှနျခရိုငျရဲတပျဖှဲ့စသညျ့ ဌာနဆိုငျရာမြားနှငျ့ စဉျဆကျမပွတျ ဆကျသှယျ၍ ညှိနှိုငျးဆောငျရှကျလကျြရှိပါကွောငျးနှငျ့ အလုပျသမားမြား၏ အခကျအခဲမြားကို ကူညီ ဖွရှေငျးနိုငျရနျအတှကျ ထိုငျးနိုငျငံရောကျစတေနာရှငျ မွနျမာနိုငျငံသားမြားနှငျ့ ညှိနှိုငျးဆောငျရှကျလကျြ ရှိပါကွောငျး အသိပေးအပျပါသညျ။
105, Pan Road, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ အလုပျသမားသံအရာရှိရုံး Myanmar Labour Attache Officeผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา
ส่งข้อความของคุณถึง အလုပျသမားသံအရာရှိရုံး Myanmar Labour Attache Office:
#Zawgyi မဲပေးရမည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းစာရင်းကို mVoter2020 app ဖြင့် Online မှ ကြည့်ကြစို့ mVoter 2020 အက်ပလီကေးရှင်းသည်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှတရားဝင် မှတ်တမ်းများကိုအခြေခံ၍မဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူတို့အတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ အချက်အလက်များ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၏အချက်အလက်များနှင့် မဲပေးပုံအဆင့်ဆင့် အပါအဝင်ပါတီစွဲကင်းသောသတင်းအချက်အလက်များပေးရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ အသုံးပြုနည်းကို video တွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး အက်ပလီကေးရှင်းကို အောက်ပါနည်းလမ်းများဖြင့် ရယူနိုင်ပါသည်- web.mvoterapp.com (Web browser) Download ရယူရန် https://mvoterapp.com/apk?ref=mps OR https://www.maepaysoh.org/ . . . #Unicode မဲပေးရမညျ့ ကိုယျစားလှယျလောငျးစာရငျးကို mVoter2020 app ဖွငျ့ Online မှ ကွညျ့ကွစို့ mVoter 2020 အကျပလီကေးရှငျးသညျပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျမှတရားဝငျ မှတျတမျးမြားကိုအခွခေံ၍မဲဆန်ဒရှငျ ပွညျသူတို့အတှကျကိုယျစားလှယျလောငျးမြား၏ အခကျြအလကျမြား၊ နိုငျငံရေးပါတီမြား၏အခကျြအလကျမြားနှငျ့ မဲပေးပုံအဆငျ့ဆငျ့ အပါအဝငျပါတီစှဲကငျးသောသတငျးအခကျြအလကျမြားပေးရနျရညျရှယျပါသညျ။ အသုံးပွုနညျးကို video တှငျကွညျ့ရှုနိုငျပွီး အကျပလီကေးရှငျးကို အောကျပါနညျးလမျးမြားဖွငျ့ ရယူနိုငျပါသညျ- web.mvoterapp.com (Web browser) Download ရယူရနျ https://mvoterapp.com/apk?ref=mps OR https://www.maepaysoh.org/
Zawgyi COVID-19 ရောဂျါဖစ္ပြားခဲ့လျွင် နောက်ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိုးမ်ားရေရွည္ခံစားရနိုင်သည့်အတြက် ရောဂါမျဖစ္ခင် ကြိုတင္ကာကြယ်ျခင်းသည်သာ အေကာင်းဆုံျးဖစ် ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗ Unicode COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားခဲ့လျှင် နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးများရေရှည်ခံစားရနိုင်သည့်အတွက် ရောဂါမဖြစ်ခင် ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းသည်သာ အကောင်းဆုံးဖြစ် ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Zawgyi ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်တွင်းရှိ သက်ဆိုင်ရာ မဲဆန္ဒနယ် ပြင်ပရောက် မဲဆန္ဒရှင်များ ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အသိပေးကြေညာချက် . Unicode ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈ၊ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲတှငျ ပွညျတှငျးရှိ သကျဆိုငျရာ မဲဆန်ဒနယျ ပွငျပရောကျ မဲဆန်ဒရှငျမြား ကွိုတငျဆန်ဒမဲပေးခွငျးနှငျ့ စပျလဉျြး၍ အသိပေးကွညောခကျြ
Zawgyi ဆန္ဒမဲပေးရာတွင် သိရှိမှတ်သား ဆောင်ရွက်ရမည့် အချက်များ Unicode ဆန်ဒမဲပေးရာတှငျ သိရှိမှတျသား ဆောငျရှကျရမညျ့ အခကျြမြား
Zawgyi #ပြည်ပရောက်မဲဆန္ဒရှင်တွေမဲစာရင်းမပါရင်ဒီလ၁၄ရက်အထိသံရုံးမှာလျှောက်ထားနိုင် ဩဂုတ်-၁၀၊ ၂၀၂၀ ပြည်ပရောက်မဲဆန္ဒရှင်တွေ မဲစာရင်းမှာ နာမည်မပါရင် ပုံစံ(၃)နဲ့တောင်းဆိုလျှောက်ထားနိုင်တယ်လို့ မြန်မာသံရုံးတစ်ချို့က အသိပေးနေပါတယ်။ နိုင်ငံပြင်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားမဲဆန္ဒရှင်တွေအနေနဲ့ ကြိုတင်မဲပေးဖို့ ပုံစံ(၁၅)တွေကို လျှောက်ထားပြီးပေမယ့် ကော်မရှင်က ကြေညာတဲ့မဲစာရင်းမှာ အမည်မပါတာတွေရှိနေတဲ့အတွက် မဲပေးခွင့်မဆုံးရှုံးစေဖို့ ပုံစံ(၃)နဲ့လျှောက်ထားကြဖို့ အသိပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ပရောက်မဲဆန္ဒရှင်တွေအနေနဲ့ မဲစာရင်းမှာ မိမိရဲ့အမည် ပါမပါကို မိသားစုဝင်တစ်ဦးဦး၊ အသိမိတ်ဆွေတစ်ဦးဦးက သွားရောက်ကြည့်ရှုပြီး မပါရင် တောင်းဆိုလွှာပုံစံ(၃)နဲ့ တောင်းဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပုံစံ(၃)ကို ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် Websiteနဲ့ နိုင်ငံအလိုက် မြန်မာသံရုံး Websiteတွေကနေ downloadရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ လျှောက်ထားလာတဲ့ ပုံစံ(၃)တွေကို သံရုံးတွေက လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးပြီး ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံ အချိန်မီ ပေးပို့ရမှာဖြစ်တာကြောင့် ဩဂုတ်လ၁၄ရက်နေ့ နောက်ဆုံထား ပို့ကြဖို့ကိုလည်း သံရုံးတွေက နှိုးဆော်နေပါတယ်။ မဲစာရင်းတွေကို ဩဂုတ်လ၁၄ရက်နေ့ထိ ကပ်ထားကြေညာမှာဖြစ်ပြီး မဲစာရင်းမှာ အမည်စာရင်းမပါပါက ပုံစံ(၃)နဲ့ တောင်းဆိုတာ၊ မပါဝင်သင့်သူတွေပါဝင်နေပါက ပုံစံ(၄)နဲ့ ကန့်ကွက်တာ၊ မဲစာရင်းပါ အချက်အလက်တွေ မှားယွင်းနေပါက ပုံစံ(၄-ဂ)နဲ့ ပြင်ဆင်လွှာ တင်သွင်းတာတွေကို ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ ရုပ်သံသတင်းထောက်-အိမ့်မြတ်နိုးဇော် Unicode #ပွညျပရောကျမဲဆန်ဒရှငျတှမေဲစာရငျးမပါရငျဒီလ၁၄ရကျအထိသံရုံးမှာလြှောကျထားနိုငျ ဩဂုတျ-၁၀၊ ၂၀၂၀ ပွညျပရောကျမဲဆန်ဒရှငျတှေ မဲစာရငျးမှာ နာမညျမပါရငျ ပုံစံ(၃)နဲ့တောငျးဆိုလြှောကျထားနိုငျတယျလို့ မွနျမာသံရုံးတဈခြို့က အသိပေးနပေါတယျ။ နိုငျငံပွငျပရောကျ မွနျမာနိုငျငံသားမဲဆန်ဒရှငျတှအေနနေဲ့ ကွိုတငျမဲပေးဖို့ ပုံစံ(၁၅)တှကေို လြှောကျထားပွီးပမေယျ့ ကျောမရှငျက ကွညောတဲ့မဲစာရငျးမှာ အမညျမပါတာတှရှေိနတေဲ့အတှကျ မဲပေးခှငျ့မဆုံးရှုံးစဖေို့ ပုံစံ(၃)နဲ့လြှောကျထားကွဖို့ အသိပေးနတောလညျးဖွဈပါတယျ။ ပွညျပရောကျမဲဆန်ဒရှငျတှအေနနေဲ့ မဲစာရငျးမှာ မိမိရဲ့အမညျ ပါမပါကို မိသားစုဝငျတဈဦးဦး၊ အသိမိတျဆှတေဈဦးဦးက သှားရောကျကွညျ့ရှုပွီး မပါရငျ တောငျးဆိုလှာပုံစံ(၃)နဲ့ တောငျးဆိုရမှာဖွဈပါတယျ။ ပုံစံ(၃)ကို ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျ Websiteနဲ့ နိုငျငံအလိုကျ မ
Zawgyi ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် ဆောင်ပုဒ်များ “မိမိအခွင့်အရေး မဆုံးရှုံးဖို့၊ မဲရုံသွားကာ မဲပေးစို့” “ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေး မဆုံးရှုံးဖို့၊ မဲရုံသွားကာ မဲပေးစို့” “မဲရုံသွားကာ ဆန္ဒမဲပေး၊ ဒီမိုကရေစီ အခွင့်အရေး” ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗ Unicode ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈ၊ ပါတီစုံဒီမိုကရစေီ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲအတှကျ ဆောငျပုဒျမြား “မိမိအခှငျ့အရေး မဆုံးရှုံးဖို့၊ မဲရုံသှားကာ မဲပေးစို့” “ကိုယျပိုငျအခှငျ့အရေး မဆုံးရှုံးဖို့၊ မဲရုံသှားကာ မဲပေးစို့” “မဲရုံသှားကာ ဆန်ဒမဲပေး၊ ဒီမိုကရစေီ အခှငျ့အရေး” ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Zawgyi ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် ဆောင်ပုဒ်များ “ဒို့ကိုယ်စားလှယ် ဒို့ရွေးချယ်ဖို့၊ မဲရုံသွားကာ မဲပေးစို့” “ဒို့ကိုယ်စားလှယ် ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်၊ မဲရုံသွားကာ မဲပေးမယ်” “မှန်ကန်ရွေးချယ် ကိုယ်စားလှယ်၊ မဲရုံသွားကာ မဲပေးမယ်” ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗ Unicide ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈ၊ ပါတီစုံဒီမိုကရစေီ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲအတှကျ ဆောငျပုဒျမြား “ဒို့ကိုယျစားလှယျ ဒို့ရှေးခယျြဖို့၊ မဲရုံသှားကာ မဲပေးစို့” “ဒို့ကိုယျစားလှယျ ကိုယျတိုငျရှေးခယျြ၊ မဲရုံသှားကာ မဲပေးမယျ” “မှနျကနျရှေးခယျြ ကိုယျစားလှယျ၊ မဲရုံသှားကာ မဲပေးမယျ” ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
နိုင်ငံပြင်ပ ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးခြင်း ဆိုတာ ဘာလဲ? နိုငျငံပွငျပ ကွိုတငျဆန်ဒမဲပေးခွငျး ဆိုတာ ဘာလဲ?
သန္ဓေ၊ တောထွက်၊ ဓမ္မစက်နှုတ်မြွက်သံချို လဝါဆို ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗ သန်ဓေ၊ တောထှကျ၊ ဓမ်မစကျနှုတျမွှကျသံခြို လဝါဆို ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Zawgyi ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲ လှုံ့ဆော်ရေးတေး ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗ ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈ ရှေးကောကျပှဲ လှုံ့ဆျောရေးတေး ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗ အောကျပါ Link မြားတှငျလညျး ဝငျရောကျကွညျ့ရှုနိုငျပါသညျ-
Zawgyi ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲ လှုံ့ဆော်ရေးတေး ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗ Unicode ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈ ရှေးကောကျပှဲ လှုံ့ဆျောရေးတေး ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Zawgyi ထိုင်းရောက် မြန်မာအလုပ်သမားတွေ ကြိုတင်မဲထည့်ခွင့်ရဖို့ မျှော်လင့်နေ ~~~~~~ ဇာဏီထွဏ်း ■ ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းလို သံရုံးနဲ့ဝေးကွာတဲ့မြို့တွေက ရွှေ့ပြောင်းမြန်မာအလုပ်သမားတွေဟာ သံရုံးအထိသွားပြီး ကြိုတင်မဲပေးဖို့ ခက်ခဲတာကြောင့် မဲပေးချင်ပေမယ့် အများစုက စာရင်းသွင်းမထားကြဘူးလို့ ထိုင်းနိုင်ငံရောက် အလုပ်သမားတွေကို ကူညီပေးနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ အလုပ်သမားတွေက ပြောပါတယ်။ လာမယ့် ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာတွေ ကြိုတင်မဲပေးနိုင်ဖို့ဆိုရင် ဇူလိုင် ၁၆ ကနေ ဩဂုတ် ၅ ရက်နေ့အထိ ဖြည့်စွက်စာရင်းသွင်းဖို့ ဘန်ကောက်မြို့မှာရှိတဲ့ မြန်မာသံရုံးက ထုတ်ပြန် ထားပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမြို့တချို့မှာ ရောက်နေကြတဲ့ မြန်မာအလုပ်သမားတွေက မဲပေးဖို့ စိတ်ဝင်စားပေမယ့် မြန်မာသံရုံးအခြေစိုက်ရာ ဘန်ကောက်မြို့နဲ့ အလှမ်းကွာဝေးပြီး သွားလာရ အချိန်ပေးရတာကြောင့် စာရင်း သွားမသွင်းနိုင်ကြဘူးလို့ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား အခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ MMP က ကိုမျိုးချစ်က ပြောပါတယ်။ ပုံစံ ၁၅ ဆိုတာက ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲပေးဖို့အတွက် မဲဆန္ဒပြင်ပကို ရောက်နေတဲ့ မဲပေးခွင့်ရှိသူတွေ ထည့်သွင်း ရတဲ့ ပုံစံစာရွက်ပါ။ မဲပေးခွင့်ရှိသူတွေ မဲပေးခွင့် မဆုံးရှုံးရအောင် ဆောင်ရွက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလျှောက်လွှာ ပုံစံမှာ လိုအပ်တဲ့ အချက်လက်တွေကို ဖြည့်စွက်ပြီး သက်ဆိုင်ရာသံရုံးကို တင်ပေးရမှာပါ။ ထိုင်းတောင်ပိုင်းကနေ ဘန်ကောက်မြို့ကို သွားမယ်ဆိုရင် တစ်ယောက်ကို မြန်မာငွေနဲ့တွက်ရင် ကျပ် တစ်သိန်း ဝန်းကျင်လောက် ကုန်ကျနိုင်ပြီး အနည်းဆုံး နှစ်ညအိပ် ခရီးသွားရမှာပါ။ နောက်ပြီး သံရုံးမှာ သွားရောက် အကူ အညီတောင်းသူများတာကြောင့် တစ်ရက်တည်းနဲ့ အလုပ်မပြီးလို့ ဘန်ကောက်မှာ ထပ်ပြီးကြာမယ်ဆိုရင် ကုန်ကျ မယ့် တည်းခိုစရိတ်၊ စားစရိတ်တွေအတွက်ပါ ထည့်စဉ်းစားကြရတာပါ။ ကပ်ဘေးကာလ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ ကမောက်ကမဖြစ်နေချိန်အတွင်း အလုပ်ပြုတ်တာ၊ ဝင်ငွေနည်းပါးပြီး စားဝတ်နေရေး ကျပ်တည်းတာတွေကြောင့် လည်း အဲဒီငွေပမာဏအကုန်ခံဖို့ အလုပ်သမားတွေအတွက် ခက်နေတာပါ။ အလုပ်ကနေ ခွင့်ရက်များများရဖို့ လည်း မလွယ်ကူကြပါဘူး။ တဖက်မှာလည်း ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲထည့်နိုင်ခွင့်ကို မဆုံးရှုံးလိုကြတဲ့ အလုပ်သမားတွေ ရှိနေပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် မဲရုံတွေ စီစဉ်ပေးစေချင်တယ်လို့ ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း ကရဘီမြို့မှာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် နေတဲ့ ကိုမြင့်ကျော်စွာဝင်းက ပြောပါတယ်။ ထ
Zawgyi #မဲပေးကြမယ် website လုပ်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်၊ website တည်ဆောက်ထားပုံ ၊ ပုံစံ၁၅ ပေးပို့နိုင်တဲ့ နိုင်ငံတွေ နဲ့ အသုံးပြုနည်းတွေကို ကုမုဒြာဂျာနယ်က ဖော်ပြပေးထားတဲ့ video file ဖြစ်ပါတယ်။ Unicode #မဲပေးကွမယျ website လုပျဖွဈခဲ့ရတဲ့ ရညျရှယျခကျြ၊ website တညျဆောကျထားပုံ ၊ ပုံစံ၁၅ ပေးပို့နိုငျတဲ့ နိုငျငံတှေ နဲ့ အသုံးပွုနညျးတှကေို ကုမုဒွာဂြာနယျက ဖျောပွပေးထားတဲ့ video file ဖွဈပါတယျ။ 👉 https://www.maepaykyamal.com/ Video: Credit
မဲပေးကြမယ် မဲပေးကွမယျ 👉 https://www.maepaykyamal.com/
၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈ ရှေးကောကျပှဲ လှုံ့ဆျောရေးတေး ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲ လှုံ့ဆော်ရေးတေး ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Zawgyi အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက် အမှာစကားပြောကြား Unicode အလုပျသမား၊ လူဝငျမှုကွီးကွပျရေးနှငျ့ ပွညျသူ့အငျအားဝနျကွီးဌာန၊ ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဦးသိနျးဆှေ လူဝငျမှုကွီးကွပျရေးနှငျ့ ပွညျသူ့အငျအားဆိုငျရာ လုပျငနျးညှိနှိုငျး အစညျးအဝေးသို့ တကျရောကျ အမှာစကားပွောကွား ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Zawgyi #မဲဆန္ဒရှင်_ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူများ_ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်မရှိသူများ Unicode #မဲဆန်ဒရှငျ_ဆန်ဒမဲပေးပိုငျခှငျ့ရှိသူမြား_ဆန်ဒမဲပေးပိုငျခှငျ့မရှိသူမြား
Zawgyi #ဆန္ဒမဲပေးရာတွင်သိရှိမှတ်သားဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်မျာ Unicode #ဆန်ဒမဲပေးရာတှငျသိရှိမှတျသားဆောငျရှကျရမညျ့အခကျြမြား
Zawgyi မဲစာရင်းတွင် အမည်ပါရှိရေး ဆောင်ရွက်ရန် အချက်များ Unicode မဲစာရငျးတှငျ အမညျပါရှိရေး ဆောငျရှကျရနျ အခကျြမြား
Zawgyi #မဲဆန္ဒရှင်တစ်ဉီးရှောင်ရန်အချက်များ Unicode #မဲဆန်ဒရှငျတဈဉီးရှောငျရနျအခကျြမြာ
Zawgyi #မဲဆန္ဒရှင်တစ်ဦး၏ #တာဝန် Unicode #မဲဆန်ဒရှငျတဈဦး၏ #တာဝနျ
Zawgyi #ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ဖြင့်ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့် . . . Unicide #ကွိုတငျဆန်ဒမဲလကျမှတျဖွငျ့ဆန်ဒမဲပေးပိုငျခှငျ့
Zawgyi #နိုင်ငံပြင်ပရောက်ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူများဆိုသည်မှာ၊ #မဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပရောက်ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူများဆိုသည်မှာ . . . Unicode #နိုငျငံပွငျပရောကျကွိုတငျဆန်ဒမဲပေးပိုငျခှငျ့ရှိသူမြားဆိုသညျမှာ၊ #မဲဆန်ဒနယျပွငျပရောကျကွိုတငျဆန်ဒမဲပေးပိုငျခှငျ့ရှိသူမြားဆိုသညျမှာ
Zawgyi #မဲဆန္ဒရှင်တစ်ဦး၏ #အခွင့်အရေးများ . Unicode #မဲဆန်ဒရှငျတဈဦး၏ #အခှငျ့အရေးမြား
Zawgyi #မဲပေးကြမယ်ဟေ့ Unicode #မဲပေးကွမယျဟေ့
Zawgyi အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ မြန်မာ ပြည်ပအလုပ်အကိုင် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်များနှင့် တွေ့ဆုံညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက် . . . Unicode အလုပျသမား၊ လူဝငျမှုကွီးကွပျရေးနှငျ့ ပွညျသူ့အငျအားဝနျကွီးဌာန၊ ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဦးသိနျးဆှေ မွနျမာ ပွညျပအလုပျအကိုငျ ဝနျဆောငျမှုလုပျငနျးရှငျမြားအဖှဲ့ခြုပျ ဥက်ကဋ်ဌ၊ ဒုတိယဥက်ကဋ်ဌ၊ အလုပျအမှုဆောငျအဖှဲ့ဝငျမြားနှငျ့ တှဆေုံ့ညှိနှိုငျး အစညျးအဝေးသို့ တကျရောကျ
Myanmar Labour Attache Office (Thai)
ပို့စ်တင်ခွင့်ပြုပါ ခင်ဗျာ Adme ခင်ဗျာ #ဘဝမှာအလုပ်အမျိုးမျိုးကြိုးစားပြီးရှာ​ဖွေခဲ့တရ် #တစ်လကို10000ထက်မပိုခဲ့ပါဖူး #အချိန်ရဲ့တန်ဖိုးကိုနားမလည်ခဲ့တဲ့အပြင် #အချိန်ကိုပါဖြုန်းတီးခဲ့မိတရ် #အချိန်ကိုတန်ဖိုးထားရင်လိုချင်တဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်မရ်ဆိုတာလဲ #နားမလည်ခဲ့ဖူး #နေ့စားလခစားအလုပ်တွေလုပ်နေခဲ့ပေမဲ့ #ပြောင်းလဲမှု့မရှိတဲ့မိမိရဲ့ဘဝကိုစိတ်နာလို့်#Successmoreမှာ5လပဲ ကြိုးစားခဲ့တရ် #1လကို10000ဘတ်ရရှိခဲ့တရ် #ဒါကြောင့်fbကမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများကိုပြောချင်တာက #ယုံကြည်မှု့အပြည့်နဲ့မိမိကိုတိုင်ကြိုးစားခဲ့လို #ဘဝမှာပြောင်းလဲမှု့ခြေလှမ်းတွေလျှောက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ပြီ #တကယ်လို့1နစ်အတွင်း1လကို100000လိုချင်ရင် #successmore ကုမ္ပဏီကိုလက်တွဲလိုက်ပါ #နေ့စား ဘဝကို မုန်းတီးနေသူများအတွက်သာ #စိတ်ဝင်စားရင်ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ် #0994538421 #AddMeစာလုံးလေးကလဲ #မိမိဘဝကိုပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိတာကြောင့် #cmမှာရေးခဲ့ဖို့မမေ့နဲ့နော်
Data collection center မှာ Passport လြောကျထားပွီး ကလြာတဲ့ အမှတျစဉျတှကေို ကြေးဇူးပွု၍မကွာခဏ အပျဒဈလုပျပေးစခေငျြပါတယျ
ဧရာဝတီတိုငျးလေးတှေ့ ထပျတငျပေးပါအုံးခဗြာ ရှာနတော မတှသေ့လေို့ပါ
ကြှနျတျော ဦးမြိုးမွငျ့စံ ဘယျ နေ့ မဲ ပေးခှငျ့ရမယျဆိုတာ သိခှငျ့ရခငျြ ပါတယျ
ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆော့က်မြို့ရှိ ကြိုတင်မဲပေးရန် ပုံစံ (၁၅) ဖေါင်တင်ထားသော အလုပ်သမားညီကို မောင်နှမများ အားလုံး မိမိတို့အနေဖြင့်သံရုံးမှထုတ်ပြန်ထားသောကြိုတင်မဲစာရင်း (https://www.facebook.com/myanmar.labour.office.thai)တွင်ပါမပါ စစ်ဆေးပေးကြပါ ။ ကြိုတင်မဲစာရင်းတွင်နာမည် စာရင်းပါသူများအနေဖြင့် ဘန်ကောက်သံရုံးတွင်ကြိုတင်မဲသွားပေးနိုင်ရန်အတွက် ရောင်ခြည်ဦးအလုပ်သမားများ အဖွဲ့ ရုံးသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းဆုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ ရောင်ခြည်ဦးအလုပ်သမားများအဖွဲ့ ဦးမိုးကျော် (ရုံးတာဝန်ခံ) – (+66) 86 938 2757 ကို မျိုးကို (ရုံးအဖွဲ့မှူး) – (+66) 87 520 3697 ၂၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀ (Unicode) ထိုငျးနိုငျငံ မဲဆော့ကျမွို့ရှိ ကွိုတငျမဲပေးရနျ ပုံစံ (၁၅) ဖေါငျတငျထားသော အလုပျသမားညီကို မောငျနှမမြား အားလုံး မိမိတို့အနဖွေငျ့သံရုံးမှထုတျပွနျထားသောကွိုတငျမဲစာရငျး (https://www.facebook.com/myanmar.labour.office.thai)တှငျပါမပါ စဈဆေးပေးကွပါ ။ ကွိုတငျမဲစာရငျးတှငျနာမညျ စာရငျးပါသူမြားအနဖွေငျ့ ဘနျကောကျသံရုံးတှငျကွိုတငျမဲသှားပေးနိုငျရနျအတှကျ ရောငျခွညျဦးအလုပျသမားမြား အဖှဲ့ ရုံးသို့ ဆကျသှယျမေးမွနျးဆုံစမျးနိုငျပါသညျ။ ရောငျခွညျဦးအလုပျသမားမြားအဖှဲ့ ဦးမိုးကြျော (ရုံးတာဝနျခံ) – (+66) 86 938 2757 ကို မြိုးကို (ရုံးအဖှဲ့မှူး) – (+66) 87 520 3697 ၂၈ စကျတငျဘာ ၂၀၂၀
ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲပေးချင်လို့ ဘယ်လို လုပ်ဆောင်ရမလဲ လမ်းညွှန်ပေးပါ ဥပမာ -သံရုံးနဲ့ဝေးတဲ့နေရာတွေ online voting ပေးရမရ
Gလေးစားလျက် ကြိုဆိုပါတယ် လေးစားလျက် ကြိုဆိုပါတယ်